Intel's nyowani 3D XPoint isina-volatile memory technology, iyo yanga iri pamakadhi pachena kwemakore mashoma apfuura, iri kurova musika senzvimbo yekuchengetera yeIntel's new flagship bhizinesi yekuchengetedza chikuva. Iyo Intel Optane SSD DC P4800X ndeyePCIe SSD inoshandisa yakajairwa NVMe protocol, asi kushandiswa kweiyo 3D XPoint ndangariro pachinzvimbo cheNAND flash memory inobvumira iyo kuburitsa hukuru hwekubuda uye yakaderera zvakanyanya latency yekuwana kupfuura chero imwe NVMe SSD.
Iyo ingangoita kukosha kweiyo 3D XPoint ndangariro yakanyanya. Payakatanga kuziviswa pachena neIntel neMicron muna2015, 3D XPoint memory yaive tekinoroji yakatosiyana yekuchengetera kubva kune flash memory inotonga pamusika. Ndiwo musika wekutanga nyowani wepamusoro, wepamusoro-soro solid state chengetedzo wepakati kusvika pamusika sezvo NAND ichizvimenya pachayo. Iyo inouya panguva iyo iyo NAND musika iri kuwedzera kunge zvisati zvamboitika, asi zvakare panguva iyo isu tinoziva kuti kune chaiko kupera kwemutsara weNAND. Shanduko inoenderera ku 3D NAND flash ingori yekumisikidzwa kwenguva pfupi kweakakosha maganho eiyo memory memory. Kana imwe nguva NAND isisakwanise kuyera muhuwandu uye mutengo-ne-bit, ichawira paradigm shanduko uye inotevera-chizvarwa ndangariro matekinoroji (imwe yacho ichave 3D XPoint) kuenderera mberi nekutakura indasitiri kumberi. Kune akawanda akawanda matsva ekurangarira matekinoroji ayo anogona kukwikwidzana padhuze neyememori memory uye 3D XPoint mumakore anouya, asi 3D XPoint ndiyo yakagadzirira kuenda mainstream izvozvi.
Munguva iri pedyo, 3D XPoint yakakosha nekuti inopa seti nyowani yekuita tradeoffs zvachose kusiyana neNAND; tradeoffs iyo, yezvakakodzera kunyorera, inogona kuendesa mashandiro akawandisa kupfuura zvigadzirwa zveNAND zvazvino. Nekugona kuverenga nekunyora padiki kana padanho reshoko - uye kwete iyo 4K + peji reji yeNAND - 3D XPoint ine mukana wekuburitsa kugona kwakanakisa pamhando dzakasiyana siyana dzekutakura, asi kunyanya mumitoro yemabasa mashoma, ayo akajairika nzvimbo dzevatengi uye dzebhizinesi.
Iko kukanganisa pano ndekwekuti, nekuda kwezvinhu zvakasiyana maererano nenguva, kugadzirwa, uye chiyero, 3D XPoint inodhura kupfuura NAND. Izvo zvinouya zvakare seyakaonda, kubatsira mukureruka kwekugadzirwa mune ino nhanho yekutanga, asi izvi zvinowedzerawo kumubhadharo. Parizvino, nekuda kwesero uye zvimwe zvinhu, hazvizokwanise kudzokorora huwandu hwesimba uye mutengo wekubudirira uyo waita kuti NAND kuchengetedza kuve kwakakurumbira muzvikamu zvese zvemusika. Nekuda kwechiyero, kunyanya seyekutanga-chizvarwa vhezheni yehunyanzvi, yekutanga 3D XPoint zvigadzirwa zviri kuitirwa hunyanzvi uye hwepamusoro-marika misika: mashandiro mashandiro, mutengi caching, nezvimwe zvigadzirwa zvenguva yemberi zvakavimbiswa kubva kuIntel zvinofanirwa kuwedzera zvisina kugadzikana DIMMs kune musanganiswa, uyezve gare gare, kana zvese zvikaenda kuronga, mukana wekutsiva weNAND flash (kana mukwikwidzi akasimba).
Iyo Intel Optane SSD DC P4800X
Iyo nyowani yekuchengetera mota, uye tarisiro yekutarisa kwanhasi, ndiyo Intel Optane SSD DC P4800X. Iyo inoshandisa nyowani yeNVMe controller Intel yakagadzirwa chaizvo kuti ishandiswe neiyo 3D XPoint ndangariro. Iko Intel bhizinesi NVMe SSD senge P3700 shandisa mutungamiriri ane gumi nematanhatu nzira yekubatanidza kune yavo memory memory, Optane SSD's controller ine chete 18 chiteshi. Kuti uwane parity pane yepamusoro kuita, yega yeaya chiteshi inofanirwa kupa yakakwira zvakanyanya kupfuura pane Flash SSD, uye inoratidza kuti yega yega 7D XPoint memory kufa kuri kuendesa kwakanyanya kuita kupfuura kufa kweyekuyeuka memory.
Iko kugona kwekutanga kweOptane SSD DC P4800X kutumira uye iyo modhi yatakayedza pano inopa kugona kushandiswa kwe375GB kubva pane yakazara 28 3D XPoint memory inofa (ina pachiteshi) yeiyo yakasvibirira 448GB. 3D XPoint ndangariro ine kutsungirira kuri nani pane NAND kupenya, asi haina kukwana kuti ubve usina kupfeka kukwirisa. Iko kugona kwakaringana kweiyo 3D XPoint ndangariro kunobvisa yakawanda yekupfeka inokwenenzvera uye kunyora kukwidziridzwa kwemusoro misoro inokonzerwa nemapeji ekupenya uye kudzima zvidhinha kuva zvakakura kupfuura iwo saizi masekisheni akafumurwa nemadrive, asi iyo dhiraivha ichiri kuda imwe nzvimbo yakasara pamwe nekuchengetedza yekukanganisa kururamisa pamusoro, metadata yekutevera mepu pakati pezvakanaka zvinodzivirira uye kero dzepanyama, uye inogona kutsiva zvikamu zvakashata, zvakafanana neyakajairwa SSD.
Sezvakawanda neNVMe SSDs, iyo Optane SSD DC P4800X inotsigira saizi inogadziriswa yechikamu. Kunze kwebhokisi inoteedzera zvikamu zve512B kuitira kuenderana, asi kushandisa iyo NVMe FORMAT yekuraira inogona kuchinjiswa kuteedzera zvikamu zve4kB. Huru hukuru hwechikamu hunoderedza huwandu hwemethadata mutungamiriri weSSD anofanirwa kuita juggle, saka inowanzo bvumidza kuita kwakakwira zvishoma. Iyo NVMe FORMAT yekuraira zvakare ndiyo nzira yekukonzeresa kudzima kwakachengeteka kweyese dhiraivha, uye kune flash SSDs fomati yacho inowanzo ine zvishoma kupfuura kuburitsa block erase mirairo kune iyo rese dhiraivha. 3D XPoint memory haina mahombekombe akawanda emamigabyte erase, saka fomati yepasi-pasi yeOptane SSD inoda kunyorera zvakananga kudhiraivho yese, iyo inotora chero sekureba sekuizadza zvakateedzana. Nekudaro, nepo 2.4TB flash SSD ichigona kuita yakaderera-fomati fomati mumasekondi anopfuura gumi nematanhatu, iyo 13GB Optane SSD DC P375X inotora maminetsi matanhatu nemasekondi 4800. Izvi zvakareba zvakakwana kuti zvisingafungidzirwe software zvishandiso kana SSD vaongorori vanozorega uye vafunge kuti dhiraivha yakavharwa.
Intel Optane SSD DC P4800X Rondedzero
chinzvimbo 375 GB 750 GB 1.5 TB
Form Factor PCIe HHHL kana 2.5 ″ 15mm U.2
inowanikwa PCIe 3.0 x4 NVMe
Controller Intel haina zita
ndangariro 128Gb 20nm Intel 3D XPoint
Chaiwo Latency (R / W) <10s
Random Verenga (4 kB) IOPS (QD16) 550,000 TBA TBA
Random Verenga 99.999% Latency (QD1) 60μs TBA TBA
Random Verenga 99.999% Latency (QD16) 150μs TBA TBA
Random Nyora (4 kB) IOPS (QD16) 500,000 TBA TBA
Random Nyora 99.999% Latency (QD1) 100μs TBA TBA
Random Nyora 99.999% Latency (QD16) 200μs TBA TBA
Yakasanganiswa 70/30 (4kB) Random IOPS (QD16) 500,000 TBA TBA
Kutsungirira 30 DWPD
garandi Makore mashanu (makore matatu panguva yekutanga kusunungurwa)
Parizvino, Intel yakangotanga kutumira iyo 375GB Optane SSD DC P4800X kusarudza vatengi, uye ivo havana kuburitsa yakadzama tsananguro yeakakura masimba ayo achatumira gare gare gore rino.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti iko kuita kwekuita kweiyo P4800X, sezvakapihwa mune zvigadzirwa zvigadzirwa machira, inovhara yakasarudzika seti yemetriki pane iyo Intel inowanzo kuzivisa kune yavo bhizinesi SSDs. Sequential performance haina kutaurwa zvachose, asi ipfupi yechigadzirwa ine zvishoma zvekutaura nezve latency: avhareji latency yeQD1 inoverenga uye inonyora, uye 99.999th percentile latency kune ese ari maviri anoverenga uye anonyora kuQD1 uye QD16. Icho chokwadi chekuti Intel iri kutsikisa mashanu-mapfumbamwe QoS metric zvachose inoratidza kuti ivo vanoronga kumisikidza chitsva chitsva chekuita kusagadzikana.
Izvo zvirevo zvekupfuudza zvakare zvinoshamisa: hafu yemiriyoni IOPS kana zvimwe zvekuverenga, anonyora uye 70/30 kuverenga / kunyora musanganiswa. Kune atova madhiraivha pamusika anogona kuendesa anopfuura 550k zvisina kujairika kuverenga IOPS, asi iwo maSDD akakurisa kupfuura 375GB uye anoda yakadzika kwazvo pamutsara kudzika 550k IOPS. Kune mamwe akati wandei maTB-madhiraivha anokwanisa kurova mazana mashanu ekunyora kunyora IOPS, asi haakwanise kutsigira iko kuita nekusingaperi. Iyo Optane SSD DC P500X iri kuvimbisa isina kumboitika nhanho yekuchengetedza mashandiro zvese mumhedziso uye zvine hukama nesimba rayo, saka zvinonakidza kuona uko Intel iri kuzoisa mutsetse wayo mujecha.
Iyo P4800X haizonyatsotora iyo imwechete niche seyemazhinji-TB mamota ayo anopa akafanana kuenzanisa. Iine hushoma hunyanzvi asi hwero hwepamusoro hwekuita, iyi Optane SSD inonyatsoenderana nebasa reSLC NAND based SSDs. SLC yakanyangarika kubva kumusika weSSD sezvo vangangoita vese vatengi vachida kupa zvishoma zvekuita kuti vawedzere kugona kwavo vachishandisa MLC NAND. Imwe yekupedzisira yepamusoro-soro SLC SSDs yaive iyo Micron P320h, PCIe SSD kubva muna 2012 iyo yakatangira-kare NVMe uye yakashandisa 34nm SLC NAND flash. Chero ani zvake achiri kushandisa P320h yeinowirirana yakaderera latency kuita ichave inofarira kwazvo iyo P4800X. Kunze kweiyo niche, iyo Optane SSD sezviri pachena ichave inodikanwa kune yayo mbishi yekubuda, asi yakaderera kugona kunogona kunetsa kune mamwe mashandisiro kesi.
Imwe yemhando yakasarudzika uye inonyanya kuoneka mashandiro ekuita kweOptane SSD DC P4800X ndeyekuti haidi zvakadzika zvakadzika mutsetse kuti uwane kuzara kuzere. Vatengi vebhizimusi vagara vakafanirwa kugadzira masisitimu avo kutenderedza chokwadi chekuti kuwana kuzere kuita kunze kweanokurumidza PCIe SSDs kunoda kurodha pasi nemitsetse yakadzika ye128 kana kupfuura, dzimwe nguva ichida mashandisiro ekushandisa tambo dzakawanda dzeI / O. Munzvimbo yemutengi kuzadzikisa kwakadzika kwetambo kwakanyanya hazvigoneke, uye munzvimbo yebhizinesi hazviitike mahara. Iyo P4800X yepamusoro yekuita yakadzika mitsara yakadzika inoita kuti ive nyore nyore dhiraivhu kuti iite hukuru chaihwo-hwenyika kuita kunze.
Intel pakutanga yakaunza 3D XPoint ndangariro seine yakanyanya kurembera kunyora kutsungirira kupfuura NAND flash-pane odhiyo ye1000x yakakwira. Iyo Optane SSD DC P4800X yakaverengerwa makumi matatu dhiraivha inonyora pazuva (DWPD) kwemakore mashanu, uye zvazvino mamodheru ekutumira panguva ino yekutanga mashoma ekuwanika nguva anongotemerwa kwemakore matatu, pane makore mashanu ayo anotarisira rutsigiro ruzere mhando dzekutengesa. Intel inoti ivo vari kunyatso chengetedza netekinoroji nyowani uye isina kuvhurwa, uye kuita masvomhu zvinoreva kuti 30 DWPD haipe chero mukana wekutsungirira pamusoro peiyo yakanyanya-yakapihwa-inopihwa-inotsvaga bhizinesi SSD. Panyaya yemazana petabyte akanyorwa, iyo P30X inongova nezvina-zvishanu kutsungirira kweSLC-yakavakirwa Micron P4800h. Kunyangwe kubvumidza kuenzanisa kweIntel kwekutanga kungave kwaive kwakabatana nekudzikira-kutsungirira panguva ino MLC kana TLC flash, zvinoita kunge ichi chizvarwa chekutanga che 320D XPoint memory hachina kusimba sekuronga kwayakaita - musoro wenyaya nhamba ye3 DWPD inoitirwa kudzikisira iyo nyaya , zvakadaro kuti Intel ifanane neayo mavambo ayo ekutanga ipapo chikamu chechipiri uye chechitatu zvikamu zvinofanirwa kuve nhanho kumusoro, uye isu tinotarisira kuvaedza.
Iyo MSRP yeiyo 375GB P4800X iri $ 1520, asi ichave iri nguva yakati kuti isati yagona kurairwa nyore nyore kubva kune makuru online vatengesi. Pachinodarika zvishoma kudarika $ 4 / GB, iyo P4800X ichave inodhura zvakapetwa kaviri paGG seIntel inotevera inotevera inodhura SSD, iyo P3608 (iri chaizvo madhiraivha maviri mune imwe pamwe nePCIe switch). Inofananidzwa neiyo Intel inokurumidza kuita imwechete SSD (iyo P3700), iyo P4800X ichave inopfuura katatu zvakapetwa paGG. Mumusika wakakura weSSD, $ 4 / GB haina kumboitika zvachose, asi makambani mazhinji ari kutengesa madhiraivha mumutengo uyu wemitengo haatombo kunyepedzera kunge aine mutengo wekutengesa.
Nezve ino ongororo yeIntel Optane SSD DC P4800X, kutanga, tichaenda kunotora zvakadzika kupinda mune izvo 3D XPoint zvazviri chaizvo. Ipapo isu tinoenda kuburikidza neyedu suite suite yemabhizinesi anotyaira, kuyedza zvirevo zveIntel mukuita.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti hapana chinhu chakadai seyakajairika-chinangwa bhizinesi SSD. Enterprise yekuchengetera basa rekuremerwa rakatosiyana-siyana kupfuura mutoro webasa mutoro uye hazvigoneke kuita zvirevo zvakajairika nezvekuti kuita kwakasarudzika kana kuenzanirana kwakanyanya kukosha, ndeupi musanganiswa wekuverenga uye unonyora kutarisira, kana kuti ndeupi mutsetse kudzika uri apporpriate yekuyedza nayo. Real-world application mabenchimendi anonetsa kuvaka uye kazhinji anopedzisira ave kunyanya kushanda zvakanyanya kupfuura zvataizotarisira. Isu zano redu rekuwongorora uku ndere kupa rakapamhamha hwakawanda hweruzivo rwekugadzira neruzivo kuti haisi mhedzisiro ichave inoenderana nezviitiko zvese zvekushandisa. Vashandi vebhizimusi vanofanirwa kuziva nekunzwisisa yavo pabasa. Sezvo ino inguva yedu yekutanga kuyedza chero chinhu chine 3D XPoint ndangariro, ongororo iyi inosanganisira mamwe mabhenji matsva ayo angangodaro asingashande kune flash SSDs ongororo, ichiitira dzimwe nhamba dzinonakidza.
Intel Optane SSD DC P4800X 750GB Maoko-Pane Ongororo
Iyo Samsung 983 ZET (Z-NAND) SSD Ongororo: Inokurumidza Sei Flash Flash Kuwana?
Iyo Intel Optane SSD 900P 280GB Ongororo